My Hpa-Ann Residence by Amata, Hotel Review
June 15, 2020 Eyint Kyi Pyar Zaw	Hotel Reviews, Hpa-an, Myanmar
ကရင်ပြည်နယ်ရဲ့ မြို့တော်ဖြစ်တဲ့ ဘားအံမြို့ မှာ အသစ်ဆက်ဆက် အခုမှ ဖွင့်ထားတဲ့ My Hpa-Ann Residence by Amata အတွက် lodggy ရဲ့ Review လေးဖြစ်ပါတယ်။ ဇွဲကပင်တောင်ကြီးရဲ့ အောက်ခြေ သစ်ရိပ်ဝါးရိပ်အောက်မှာ လာမဲ့ နွေရာသီရဲ့အပူကိုရှောင်ရှားလိုတဲ့ ခရီးသွားချစ်သူတွေအတွက် အားလပ်ရက်မှာ သွားရောက်တည်းခိုနိုင်အောင် လက်တို့အသိပေးလိုက်ပါတယ်နော်.. ဟိုတယ်အနေအထား Amata hotel chainရဲ့ Signature တစ်ခုလို့ပြောလို့ရတာက ဟိုတယ်ဝန်းကျင်မှာ စိမ်းစိုတဲ့သစ်ရိပ်ဝါးရိပ်ပေါများတာပါပဲ။ ဒီဟိုတယ်လေးကလဲ ရာဘာတောအုပ်ထဲမှာဆောက်ထားတော့ အရီပ်အာဝါသ ကောင်းပါတယ်။ ဒီရက်ပိုင်းသွားရောက်တည်းခိုခဲ့တာဖြစ်ပြီး မနက်နဲ့ညနေခင်းဆိုရင် အေးအေးလေးနဲ့ နေလို့ကောင်းတယ်.. ရေကူးကန်လည်းရှိတယ် အခုကတော့မပြီးသေးပါဘူး.. ဒီနှစ် (၂၀၂၀) အကုန်ပိုင်းမှာ ဆောက်လုပ်ပြီးစီးမယ်လို့ပြောပါတယ်။မြင်းဆောင်းတန်းလဲဆောက်လက်စ ဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ်။ မြင်းဆောင်းတန်းပြီးပြီဆိုရင်တော့ ဟိုတယ်တဝိုက်နဲ့ ဇွဲကပင်တောင်ခြေအထိ မြင်းစီးလို့ရမယ်လို့ပြောပါတယ်။မိုးတွင်းပိုင်းဆိုရင်တော့ ဟိုတယ်ဝန်းထဲမှာ ချောင်းလေးတခုလဲ …
Read the full post →“My Hpa-Ann Residence by Amata, Hotel Review”
LeaveaComment on My Hpa-Ann Residence by Amata, Hotel Review
May 5, 2020 kyaw kyaw	Hotel Reviews, Myanmar
ခရီးသွားရတာ၊ ဓါတ်ပုံရိုက်ရတာ ဝါသနာပါတယ်ဆိုတဲ့သူတွေအတွက်ဒီတစ်ခါတော့ မြန်မာပြည်တွင်းကထူးထူးခြားခြားလေး ဆောက်ထားတဲ့ဟိုတယ်လေးတွေပြောပြမယ်နော်။ဘယ်ဟိုတယ်လေးတွေဖြစ်မလဲ? ဘယ်ဟိုတယ်လေးတွေကော တည်းဖူးကြလဲ? Agga Pyinoolwin အခုနောက်ပိုင်း ခေတ်စားနေတဲ့ Tiny House အိမ်ပုံစံလေးတွေကိုဆောက်လုပ်ထားတဲ့ ပြင်ဦးလွင်ရဲ့ ပထမဆုံး Tiny House လေးပါ။ ချစ်စရာကောင်းတဲ့ အရောင်စုံအိမ်သေးသေးလေးတွေထဲမှာမှ အိပ်ခန်း၊ ရေချိုးခန်း၊ ဧည့်ခန်းတွေကို ဖွဲ့စည်းထားတာပါ။ အိမ်လေးတွေနဲ့ကော၊ အိမ်အထဲမှာပါ ဓါတ်ပုံရိုက်လို့အရမ်းလှပါတယ်။ မြက်ခင်းစိမ်းစိမ်းလေးပေါ်က ခုံလှလှလေးတွေမှာထိုင်ပြီး အေးချမ်းလှပတဲ့ တောင်ပေါ်မြို့လေးရဲ့ အလှတရားတွေနောက်ကို စီးမျောလို့ရပါတယ်။ Aung Mingalar Island & Floating Hotel (ချောင်းသာ) ချောင်းသာရဲ့ တစ်ခုတည်းသော ရေပေါ်ဟိုတယ်ပါ။ ဖိုးကုလားကျွန်းပေါ်မှာ ရှိပြီး သင်္ဘောပေါ်မှာဆောက်ထားတဲ့ Aung Mingalar Floating Hotel ရယ်၊ အောင်မင်္ဂလာကျွန်းဟိုတယ်ရယ်ဆိုပြီး ၂ မျိုးရှိပါတယ်။ …
Read the full post →“မြန်မာပြည်က ဒီဇိုင်းဆန်းဆန်းနဲ့ ဟိုတယ်များ”
LeaveaComment on မြန်မာပြည်က ဒီဇိုင်းဆန်းဆန်းနဲ့ ဟိုတယ်များ
August 28, 2019 Aung Toe	Hotel Reviews, Myanmar
Myanmar Version Below ⬇ Nestled inaquiet inlet on the eastern shore of Inle Lake, Inle Princess Resort will wow those who pass its grounds. Under the shadow of Shan Mountain ranges and surrounded by lush tropical gardens, the resort isagateway to the beautiful lake. Yet, at the same time, it feels …
Read the full post →“Inle Princess Resort Review”
inle princess resort, ipr, substainabilityLeaveaComment on Inle Princess Resort Review